Isimemezelo Somthetho Sokuqalisa Esinamandla
I-StartUp nokukhula komnotho
Umgomo omusha wezimboni wentuthuko kanye nokuncintisana Umbono nenqubo yomthetho
Izinyathelo ezethulwe lapha zihlose ukukhuthaza ukukhula okusimeme, ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe, ukuhlanganiswa kwe-ecosystem ethandwa isiko elisha lezamabhizinisi elizinikele emisha nasekuqashweni, ikakhulukazi kubantu abasha. Ngaphezu kwalokho, lezi zinhlinzeko zihlose ukugqugquzela ukuhamba kwezenhlalo okukhulu, ukuqiniswa kokuxhumana phakathi kwamanyuvesi kanye namabhizinisi kanye namandla anamandla okuheha amathalente angaphandle kanye nezimali ezinkulu ezweni lethu.
Ukufeza lezi zinhloso, kusukela ngonyaka ka-2012 uHulumeni ubambe iqhaza ekuthuthukisweni komthethonqubo wezinto eziphilayo kuhloswe ngawo ukuthokozela ukuzalwa nokukhula kwezinkampani ezintsha ezintsha ezinenani eliphakeme lobuchwepheshe. Itshe lalolu hlelo nguMthetho Wezinqumo 179/2012, owaziwa nangokuthi "Ukukhula Komthetho 2.0", othwele "Izinyathelo eziphuthumayo ezengeziwe zokukhulisa izwe"Futhi siguqulwe yiPhalamende ngoMthetho we-18 Disemba 2012 n. 221.
Kwemukela ukusikisela okwenziwe kuMbiko Qala kabusha, Italy! - ithuthukiswe iqembu labasebenza ngochwepheshe abayi-12 elisungulwe ngo-Ephreli 2012 nguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho - futhi yavela ekubonisaneni nabadlali abaphambili bohlelo lwamabhizinisi kazwelonke, iGreating Decree 2.0 yethule incazelo entsha ohlelweni lwezomthetho lwase-Italy inkampani entsha enenani eliphakeme lobuchwepheshe, i ukuqala okuhle. Ngendlela entsha ngokuphelele, esekela lolu hlobo lwenkampani, sekumiswe umthetho omkhulu (izindatshana 2532) - ngaphandle kokwenza umehluko emkhakheni noma ukubeka noma yimuphi umkhawulo ohlobene nobudala bosomabhizinisi - ohlinzeka ngamathuluzi amasha nezinyathelo ezinhle ezithinta wonke umjikelezo wempilo yenkampani, kusukela ekuqaleni kuya ekunwetshisweni nasekuvuthweni. Ngokwakha uhlaka lokulawula oluhambelana nezidingo zabo bonke abadlala kusistimu yokuqalisa, i-Growth Decree 2.0 idlula nje ukusebenza ukwenziwa komthetho futhi kuthatha inani a inqubomgomo okuphathelene nokuhlangene okukhombisa umkhondo obalulekile wenqubomgomo yezimboni ekwakheni izinto ezintsha.
Kaze kube yi-static, inqubomgomo yokuqalisa izinto ezintsha iye yathinteka eminyakeni emine edlule ngokungenelela okuthuthukile okuhlukahlukene: izindlela ezifana noMthetho Womthetho 28 Juni 2013, n. I-76, eyaziwa ngokuthi "Abasebenzi Isimemezelo", Umthetho Wezomthetho wangomhla zingama-24 kuJanuwari 2015, cha. 3, eyaziwa nge- "Investment Compact", kanye ne-Law 11 December 2016, n. Abangu-232, abaziwa kangcono njengoMthetho weSabelomali Sika-2017, sebecwengile, baqinisa futhi banweba ukunikezwa kokuhlinzeka ngezinsizakusebenza ezinikezwe ku "Ukukhula kwe-2.0 Isimemezelo". Izinyathelo ezengeziwe, ezingafakwanga kumnyombo wokuqala wenqubomgomo kokuqalisa okusha, bese kungenelelwa ukucebisa uhlaka oluphelele lwezinqubomgomo zamabhizinisi amasha: indawo yokuguqula lo mqondo imelelwa ukwethulwa kohlelo Isu Lezimboni Likazwelonke le-4.0 (incwajana, isethulo ngesiNtaliyane nesiNgisi). Lo mbhalo ugxile ezenzweni ezinikelwe ukuqalisa okusha, kepha futhi unikeza amazwibela we-panorama ebanzi yezinqubomgomo zokuqamba ezintsha zikazwelonke ezishiwo ngenhla.
Izincazelo, umbuso wokukhangisa kanye nokuqapha
Umthetho ubhekisa ngqo ekuqaleni ezintsha ukugqamisa ukuthi izinyathelo azihlosi kunoma iyiphi inkampani esanda kwenziwa kepha kuphela kulabo abasebenza emkhakheni wezobuchwepheshe obusha. Ngaphandle kwalokhu umehluko, akukho mkhawulo womkhakha odonswayo: umthethonqubo uvulekele wonke umhlaba wokukhiqiza, kusuka kwedijithali kuya kukhiqizwayo, kusuka kwezohwebo kuya kwezolimo. Incazelo yokuqalisa okusha: Izinkampani ezinkulu, ezihlanganiswe nefomu lokubambisana, elinamasheya noma amayunithi amele imali eyabelwe angafakwanga emakethe elawulwayo noma ohlelweni lokuhweba oluningi, futhi abanezidingo ezilandelayo, bangafinyelela kulezi zindlela zokunikeza amandla:
- Ngingu esisanda kusungulwa noma okungenani babe isungulwe iminyaka engaphansi kwewu-5 (kunoma yisiphi isimo hhayi ngaphambi komhla ziyi-18 kuZibandlela 2012);
- babe ihhovisi eliyinhloko e-Italy, noma kwelinye izwe elingamalungu e-European Union noma emazweni aseMelika avumelana nesivumelwano nge-European Economic Area, uma nje enawo indawo yokukhiqiza noma igatsha e-Italy;
- abe inani lokukhiqiza lonyaka elingaphansi kwezigidi ezingama-5; azisabalalisi futhi azisabalalisi inzuzo;
- Thanda inhloso yenhlangano okukhethekile noma okukhona ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokukhangiswa kwemikhiqizo emisha enenani eliphakeme lobuchwepheshe;
- ungahlanganisi fusion, Hlukanisa ezinkampani noma ezilandelayo ukunikezelwa inkampani noma iyunithi lebhizinisi.
Ekugcineni, okuqukethwe okusha kwenkampani kukhonjwa ngokutholakala okungenani eyodwa kulezi zindlela ezintathu ezilandelayo:
isabelo esilingana 15% inani eliphakeme phakathi kwemali engenayo kanye nezindleko zonyaka kubangelwa yimisebenzi ye ucwaningo nentuthuko;
la bonke abasebenzi yenzelwe okungenani 1/3 ngabafundi be-PhD, ama-PhD noma abacwaningi, noma okungenani 2 / 3 ngabalingani noma abahlanganyeli kunoma iyiphi indawo abanayo isiqu esiphezulu;
ibhizinisi li umnikazi, umgcini noma umnikazi welayisensi di un imvume ebhalisiwe (ilungelo lesakhiwo sezezimboni) noma umnikazi we Uhlelo lwekhompyutha lwangempela registrato.
Ukuchazwa kokuqalisa ngomsebenzi wezenhlalo: lolu hlobo lwenkampani lunazo zonke izidingo ezibonisa ukuqala kwekhono kepha ngokungezelela lusebenza kwemikhakha ethile umthetho wase-Italy oluthatha ngokubaluleka okuthile kwezenhlalo.1 ISekethe 3677 / C, ekhishwe nguMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho ngomhla zingama-20 kuMasingana wezi-2015. wethule inqubo entsha yokuziqinisekisa yokwamukelwa kweziqalo ezintsha ngomsebenzi wezenhlalo, ngokususelwa ekubikeni umthelela wabo. Ngasikhathi sinye, ukuze uhambisane kangcono nomsebenzisi ekusebenzeni kwenqubo entsha, uMnyango ushicilele "Umhlahlandlela wokuqalwa Kwedokhumenti Yezincazelo Zomphumela Wezenhlalo", umphumela wokusebenzisana noMnyango Wezemfundo, Inyuvesi Nocwaningo. kanye nabalingisi bezamabhizinisi abahlukahlukene.
1. Inkampani inomsebenzi wokuxhumana nomphakathi uma isebenza emikhakheni ekhonjwe indlela yezamabhizinisi ezomthetho (Umthetho Omisiwe 155/2006, ubuciko 2 isigaba 1). Imikhakha ekhonjwe yilena yosizo kwezenhlalo; ukunakekela impilo; imfundo, imfundo nokuqeqeshwa; ukuvikela imvelo kanye nemvelo; ukuqoqwa kwemfucuza yedolobha, ekhethekile nenobungozi; ukuthuthukiswa kwamagugu amasiko; ezokuvakasha; imfundo yasenyuvesi neyangemva kokufunda iziqu; ukucwaninga nokuhlinzekwa kwezinsizakalo zamasiko; ukuqeqeshwa okwenziwa ngaphandle, okuhlose ukuvikela ukuhamba kwesikole ngasesikoleni kanye nempumelelo yokuqeqeshwa.
Inchazelo yokufaka okufakwe isitifiketi okuqinisekisiwe: Lesi yisakhiwo okumele sihlangabezane nezidingo ezithile, ezichazwe yi-Ministerial Decree yangomhla zingama-22 kuDisemba 2016 - esivuselela isimemezelo sokuqalisa sangaphambilini, sange-22 kuFebruwari 2013 - esiphathelene nezakhiwo, abasebenzi, okokusebenza futhi, ngaphezu kwakho konke, kufanele sikhombise okuhlangenwe nakho okufakazelwe emisebenzini yokusekela ukuqala nokuthuthukisa amabhizinisi amasha ngokunikeza ngezinsizakalo zokungenisa impahla i-physics, njengokukhiqiza imiphumela yokungcola kanye ne-spillover kwindwangu yebhizinisi yensimu. Ngale ndlela, umthetho uhlose ukukhipha futhi uthuthukise ubuciko bezwe kuzwelonke emkhakheni wokufakwa nokwanda kwezinkampani ezintsha ezintsha ezinenani eliphakeme lobuchwepheshe. Ama-incubators aqinisekisiwe ayazuza kwezinye izakhiwo ezinikezwe iziqalo ezintsha, kufaka phakathi: ukwenziwa kwenkampani ngemodeli ejwayelekile ejwayelekile → v. isig. "Izindlela zokusiza", iphuzu 1; ukukhululwa emalungelweni wekamelo nemisebenzi yesitampu → v. isinyathelo 2; amathuba okwamukela izinhlelo zokukhuthaza ukulingana - okuxhaswe intela - noma ngabe kusethwe ngendlela ye-srl → v. isinyathelo 9; ukufinyelela okulula nokwenza mahhala eSikhwameni sesiQinisekiso sama-SME → v. isinyathelo 12; ukufinyelela okukhethekile kuhlelo lwe-Italia Startup Visa → v. isig. "Izinyathelo ezengeziwe zohlelo lwe-ecosystem emisha", iphoyinti 3.
Umbuso wokukhangisa: iziqalo ezintsha kanye nokufakela okuqinisekisiwe kumele kubhalise ezingxenyeni ezikhethekile zeRejista Lebhizinisi (ama-Startups; Ukubhaliswa, mahhala, kwenzeka ngokuthumela ngogesi kwiChamber of Commerce enekhampasi yesimemezelo sesitifiketi sokuzazisa sokutholakala nalezi zidingo ezingenhla: amamodeli nomhlahlandlela wokuzazisa ngokwakho kuyatholakala ku http://startup.registroimprese.it/. Lokhu kuguquguquka "okungenayo" kulinganiswa ngamakhompiyutha amabili: amasheke aqhutshwa yiChambers of Commerce abhekele insiza ekutholakalelo lwangempela lwezidingo ezidingekayo (bona kulokhu kulokhu kuyisiyingi No. 3696 / C somhla ziyi-14 kuFebhuwari 2017); isibopho sokuvuselela imininingwane enikezwe ngesikhathi sokubhalisa esigabeni esikhethekile njalo ngenyanga eziyisithupha (umnqamulajuqu 30 Juni no-31 Disemba) nokuqinisekisa kanye ngonyaka, ngasikhathi sinye ngesibopho esisodwa sonyaka, ukuba nezidingo, ngaphansi kwesijeziso sokulahlekelwa kwesimo esikhethekile nezinsiza ezihlobene naso (ukuthola eminye imininingwane, bheka isiyingi esingu-3672 / C esikhishwe nguMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho ngo-Agasti 29, 2014; umhlahlandlela wezidingo zolwazi zabaqalayo nabangenisi). Le mininingwane ikakhulukazi iphathelene nohlobo lomsebenzi owenziwayo, ngokubhekisisa ezintweni ezifakiwe ezihlobene nokwenziwa kwezobuchwepheshe. Irejista ekhethekile yokuqamba okusha yenziwa emphakathini ngefomethi ye-elekthronikhi futhi ivuselelwa masonto onke ngohlelo lwegumbi, ukuze kukhangiswe, kugqugquzelwe ukuqashwa okwandile kanye nempikiswano efanelekayo nenhloso ngomthelela umthetho omusha ozoba nawo ekukhuleni komnotho, ukuqashwa kanye namasu amasha (bheka isigaba "Uhlu nezibalo").
#I-ItalyFrontiers (http://startup.registroimprese.it/isin/home): yethulwe ngoNovemba 13, 2015 ngenhloso yokwandisa nokwandisa impahla yolwazi ezinkampanini ezintsha zase-Italy, i-#ItalyFrontiers iqukethe ipulatifomu ye-inthanethi lapho isiqalo ngasinye se-ubunifu ne-SME singakha iphrofayela yaso yomphakathi ngezifiso ngezilimi ezimbili. Kwinkampani ngayinye, ishidi elinemininingwane liyatholakala, ngaphezu kwedatha yomuntu siqu esevele ikhona engxenyeni ekhethekile Yerejista Yezinkampani (igama, indawo, usuku lokusungulwa nokuqala komsebenzi, isigaba sereferensi, isigaba sosayizi ngokuya ngabasebenzi, capital inani elisatshalaliswa kanye nokukhiqizwa), futhi nemininingwane eminingi eyengeziwe efakwe yinkampani ngayinye. Kubandakanya isigaba sokuthuthuka kwebhizinisi, izimfanelo zeqembu, incazelo yemikhiqizo noma izinsizakalo ezenziwayo, izidingo zezimali, imali ephakanyisiwe kanye nezimakethe zezithenjwa. Uma sesisayinwe ngesiginesha yedijithali ngummeli wezomthetho (umhlahlandlela wokuhlanganisa), lolu lwazi lutholakala kuwo wonke umuntu okusobala emphakathini ngale nkampani. Isamba salawa makhadi sivumela ukudalwa kombukiso wangempela wokuqalwa kwama-intanethi nama-SME amasha, ongashaywa mkhuba yizinkampani zendabuko ezinesifiso sokuqala ukubambisana ekuqambeni izinto ezintsha kanye nabatshalizimali base-Italy nabangaphandle abafuna amathuba amasha anamandla amakhulu buyela.
Ukuqapha kanye nokuhlola: njengoba inqubomgomo ifuna "ukusekelwa ubufakazi", isigungu esilawulayo sinikezela ngokwakhiwa kohlelo oluhlelekile lokuqapha kanye nokuhlola umthelela wezomnotho wezinyathelo, futhi lubeke nesibopho kuNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho ukubika njalo ngonyaka ePhalamende. Lo mbiko uphinde ukhulume ngemisebenzi yeKomidi Lokuqapha Nokuhlola, elibekwe kanye ne-Ngqongqoshe Isinqumo somhla zingama-31 kuJanuwari 2014. Umbiko Wonyaka Wongqongqoshe ePhalamende usuthole uhlelo lwawo lwesithathu, olwethulwe ngomhlaka 13 kuFebhuwari 2017. Uphinde lwashicilelwa olimini lwesiNgisi , Umbiko Wonyaka uletha ukuthuthuka kokulawula okwenzeka esikhathini sereferensi kanye nobufakazi obukhulu obukhishwe yizinyathelo ezakha i-Italian Startup Act. Izinhlelo ezimbili zangaphambilini, ezitholakala engxenyeni enikezelwe yewebhusayithi yoMnyango, zibhalwe ngomhlaka 1 Mashi 2014 nango-16 Disemba 2015.
Ukuzimisela ukudalula esidlangalaleni imininingwane ekhiqizwe yizinyathelo ezahlukahlukene ezakha i-Italian Startup Act futhi kuyazibonakalisa ekwakhiweni kohlelo lokubika oluhleliwe, oluqukethe imibiko emine yekota, ephathelene:
ukufinyelela kwesikweletu sezinto ezintsha eziqala ngokungenelela kwesikhwama sesiQinisekiso sama-SME;
Ukusetshenziswa kwendlela entsha yedijithali neyamahhala yokuqamba okusha ngendlela ye-srl;
imikhuba yezomnotho yengxenye ekhethekile Yerejista Yezinkampani: amandla okuqashwa, ukwakhiwa kwezinhlaka zomphakathi kanye nokusebenza kwezimali;
ukusebenza kohlelo lwe-Italia Startup Visa & Hub.
Ekugcineni, u-Istat usungule isigaba sezibalo kuwebhusayithi yakhe esiphathelene nokusebenza kokuqalisa okusha maqondana nenzuzo, ukuqina, ukuqina kanye nemiphumela ekhiqizwe yizinyathelo zokulekelela.
Izinyathelo okukhulunywa ngazo zisebenza kusekela iziqalo ezintsha zeminyaka engu-5 kusukela ngosuku lokuqalisa kwazo:
Indlela entsha yokusetha yedijithali mahhala (I-Art 4, isigaba 10 bis Investment Compact): ngesimemezelo sikaNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho sangomhla ziyi-17 kuNhlolanja wezi-2016, kungenzeka ukuthi kwethulwe amandla okuqala okusha nabangenisi abaqinisekisiwe bokubhala izindatshana zenhlangano besebenzisa imodeli ejwayelekile ethayishiwe ngokusebenzisa i kwisiginesha yedijithali, ngokufana nalokho okuvele kunikelwe izinkontileka zenethiwekhi. Isimemezelo Songqongqoshe sangomhla zingama-28 ku-Okthoba 2016 sandisa ukusetshenziswa kwenqubo esayiniwe ngedijithali kuzichibiyelo ezilandela izihloko zenhlangano. Indlela entsha yokusetha iveza izici eziningi ezintsha. Okokuqala, ukusetshenziswa kwayo mahhala: azikho izindleko ezithile ezihlobene nokwakhiwa kwenkampani entsha, ngokulondolozwa okusobala kosomabhizinisi uma kuqhathaniswa nenqubo evamile enetayitela lomphakathi. Inqubo iboniswa ukwelula okuqinile: inqubo yonke yenzeka online, endaweni yesikhulumi esizinikezele (umhlahlandlela womsebenzisi), futhi ukuqashelwa kobunikazi bamagama asayine itayitela kuqinisekiswa ukusetshenziswa kwesiginesha yedijithali. Izindatshana zenhlangano zihlanganiswa kusetshenziswa ithempulethi elingumfaniswano, ngefomethi ye-XML, evumela ngasikhathi sinye ukulawulwa okuqinile namakhono okwenza ngokwezifiso. Ekugcineni, kufanele kwaziwe ukuthi le nqubo ihlala kanjani ngokuzithandela: kulabo abafisayo, kungenzeka njalo ukusetha i-srl ngetayitela lomphakathi elijwayelekile futhi ngasikhathi sinye (noma ngemuva kwalokho) ukuyibhalisa engxenyeni ekhethekile yeRejista.
Ukukhululwa emalungelweni wekamelo nemisebenzi yesitampu: umthetho omusha owenzelwe i-Chambers of Commerce awusebenzi ekuqaliseni okusha nakwizifakazelo eziqinisekisiwe, futhi, njengoba kucacisiwe ngombuthano we-16 / E okhishwe yiRevenue Agency ngomhla ziyi-11 kuNhlangulana 2014, amalungelo wobunobhala kanye umsebenzi wesitembu uvame ngenxa yesibopho okufanele senziwe kuRegista Yezinkampani.
Ukwehlulwa yimithetho ejwayelekile yebhizinisi: ukuqala kokuqala okusethwe ngohlobo lwe-srl kuvunyelwe ukwenza: ukudala izigaba zokwabelana ngamalungelo athile (ngokwesibonelo, izigaba zamasheya ezingabonisi amalungelo okuvota noma azinikeze ngesilinganiso esingahambisani nokubandakanyeka); ukwenza okwenziwayo ngamasheya abo; khipha amathuluzi wezezimali abambe iqhaza; ukunikezela ngamasheya wezezimali emphakathini. Iningi lalezi zinyathelo lifaka ushintsho olukhulu esakhiweni sezezimali se-srl, ukusisondeza kulokho kwe-spa
Ukunwetshwa komnqamulajuqu wokumboza ukulahleka: uma kwenzeka ukwehla kwemali engaphezulu kwengxenye eyodwa kwezintathu, igama elithi lapho ukulahleka kufanele kuncishiswe kungaphansi kokuthathu kubekelwa unyaka wezimali olandelayo (esikhundleni sonyaka wezimali olandelayo). Uma kwenzeka kwehliswa imali enkulu ngenxa yokulahleka okungaphansi kobuncane bezomthetho, umhlangano wabaninimasheya, njengenye indlela yokwehliswa ngokushesha kwenhloko-dolobha kanye nokwanda ngasikhathi sinye kwesibalo esingelona esingaphansi kwesilinganiso esingaphansi komthetho, kungahle kuxazulule isinqumo sokuvalwa kwesinqumo konyaka olandelayo.
Ukwehlulwa kusuka kumthethonqubo ezinkampanini zamagobolondo kanye nokulahleka okuhlelekile: Ukuqalwa kwezinto ezintsha azikhonjelwa kumthethonqubo wezinkampani zamagobolondo kanye nezinkampani zokulahleka okuhlelekile. Ngakho-ke, uma kwenzeka imali engenayo "engahambelani" noma yokulahleka kwentela okuhleliwe, izinhlawulo zentela ezinikezwe izinkampani ezibizwa ngamagobolondo aziveli, ngokwesibonelo ukufakwa kwemali engenayo kanye nesisekelo sentela esincane ngezinhloso ze-IRAP. , ukusetshenziswa okulinganiselwe kwesikweletu se-VAT, ukusetshenziswa kohlu lwe-Ires lwe-10,5%.
Ukukhululwa esibophisweni sokunamathisela i-visa yokuvumelana nokunxephezela amakhredithi we-VAT (ubuciko 4, isigaba 11novies Investment Compact): umthetho ojwayelekile onqamula ukufakwa kwe-visa yokuhambisana nesinxephezelo ku-F24 yama-VAT amakhredithi angaphezu kwama-15.000 euros angasho ukungahambisani nokusetshenziswa kwesinxephezelo esisezingeni eliphezulu. Ngokukhululwa emfunekweni ye-visa yokubuyiselelwa kwezikweletu ezingama-VAT afika ku-50.000, XNUMX, iziqalo ezintsha zingathola izinzuzo ezinkulu ze-liquidity.
Umsebenzi wokuqondiswa kwezigwegwe usayizi: ngaphandle umahluko othile othize, iziqalo ezintsha zingaphansi kokulawulwa kwezinkontileka zesikhathi esinqunyelwe ezinikezwe nguMthetho Wezomthetho 81/2015 (umthetho obizwa nge- "Jobs Act"). Ukuqalisa okusha ngakho-ke kungaqasha abasebenzi ngezinkontileka zesikhathi esinqunyelwe sesikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezingama-36. Kungakapheli lesi sikhathi, izinkontileka zingabuye zibe zesikhashana futhi zivuselelwe kaninginingi, ngaphandle kwemingcele yesikhathi nenani lezandiso ezinikezwe yi-Jobs Act. Ekupheleni kwezinyanga ezingama-36, inkontileka ingavuselelwa kuphela kanye kanye, isikhathi esilingana nezinye izinyanga eziyi-12, okuletha ubude besikhathi sobudlelwano bokuqashwa ezinyangeni ezingama-48. Ngemuva kwalesi sikhathi, ubudlelwane bokusebenzisana buba uhlobo lwesivumelwano esingapheli. Ngaphezu kwalokho, ngokungafani nokwenzeka kwezinye izinkampani, iziqalo ezintsha ezinezisebenzi ezingaphezu kwe-5 akudingeki ukuthi zingene kwizinkontileka zesikhathi esinqunyelwe esibaliwe maqondana nenombolo yezinkontileka ezihlala zisebenza.
I-faculty ukubuyisela abasebenzi ngokuguquguqukayo: ngokuya etafuleni elincane, kushiyelwa ezinhlanganweni ukunquma ukuthi iyiphi ingxenye yomholo olungiselelwe nokuthi iyiphi eguqukayo. Ingxenye eguqukayo ingahle ibe nokwelashwa okuhlobene nokusebenza kahle noma inzuzo yenkampani, umkhiqizo wesisebenzi noma weqembu lomsebenzi, noma kwezinye izinhloso noma ngamapharamitha wokusebenza okuvunyelwene ngawo phakathi kwezinhlangano, kufaka phakathi iphuzu elilandelayo.
Umholo ngezisetshenziswa zokubamba iqhaza kwezokulingana (umhlahlandlela kanye nemodeli ephawuliwe yohlelo lokukhuthaza ukulingana inketho yesitoko), kanye nabahlinzeki benkonzo yangaphandle ngokusebenzisa sebenzela ukulingana. Imali etholakala esabelweni salezo zisetshenziswa ayinasandla ekwakhiweni kwemali engenayo yentela, noma ngezinhloso zentela noma ngezinhloso zokufaka isandla.
Izinkuthazo zentela yokutshalwa kwemali enkulumeni yebhizinisi yamanani okuqalisa amasha kuvela kubantu bemvelo nabasemthethweni. Lesi sikhungo, sizinzile futhi sathuthukiswa kakhulu ngomthetho weBhajethi ka-2017 (ubuciko.1, isigaba 66), sihlinzekela phenone fisiche una ukuncishiswa kwentela yomuntu siqu ka-30% kokutshalwa kwezimali, kuze kufike ema-euro ayizigidi eziyi-1; Okwe izinhlangano ezingokomthetho inkuthazo iqukethe eyodwa 30% ukuncishiswa kwentela kokutshalwa kwemali, kufinyelela kuma-euro ayizigidi eziyi-1,8. Kuze kube ngu-2016, amanani okugqugquzela afinyelela ku-19% ekutshalweni kwemali ngabantu bemvelo kanye nama-20% ezinhlaka zezomthetho, ngaphandle kokonyuka ngo-25% no-27% ngokulandelana esimweni sokutshala imali kokuqalisa okudala okunomsebenzi kwezenhlalo noma amandla, lapho isilinganiso esisodwa sama-2017% sisebenza kusuka ngonyaka we-30 (bheka umthetho wokuqalisa unyaka wezimali ka-20132015- 2016; ukusebenzisa isimemezelo sonyaka wezimali ka-2017). Izinkuthazo zisebenza ngazo zombili esimweni sokutshala imali okuqondile kokuqalwa kokudala kanye nokutshalwa kwemali okungaqondile ngokusebenzisa i-UCITS nezinye izinkampani ezitshala imali kakhulu ezintweni zokuqala ezintsha nama-SME. Kusukela ngonyaka ka-XNUMX, ukusetshenziswa kwesikhuthazo kunemibandela yokulondolozela ukubamba iqhaza kokuqamba kabusha okuyisisekelo kweminyaka emithathu (ngaphambili, iminyaka emibili).
Ikhono lokukhulisa imali nge ukuqoqwa kwemali kwizizinda ezi-inthanethi ezigunyaziwe. Ngo-2013 i-Italy kwaba yizwe lokuqala emhlabeni ukwamukela umthetho ozinikele. Ekuqaleni konyaka ka-2015, Umthetho “Umthetho Wokutshala Imali” oshiwo ngenhla uqinise ithuluzi ngokwazisa ngezinto ezintathu ezibalulekile: ama-SME amasha angenza nemikhankaso yokubuyisa imali yokulingana; Kanjalo ne-UCITS kanye nezinye izinkampani zamasheya ezihlanganyelwe ezitshala imali kakhulu kumalimi wokuqalisa nama-SME amasha, ukuziphendukela kwemvelo okuvumela ukwehluka kwamaphothifoliyo kanye nokwehliswa kwengozi kumtshalizimali wokuthengisa; ngendlela yokudlula emithethweni ejwayelekile, ukudluliswa kwamasheya wokuqalwa kwamasu amasha nama-SME wokudalwa ayenziwa impahla, kuncishiswe umphumela wamacala ahlobene, ngenhloso yokufaka amanzi emakethe yesibili. Ngokuxazululwa komhla zingama-24 kuFebhuwari 2016, uConsob ubuyekeze i- Regulations ekubuyiselweni kwemali ngobuningi ngokuthatha izinguquko ezishiwo ngenhla nokwenza eminye imisebenzi elula: amasheke ngokufaneleka kokutshalwa kwezimali angenziwa ngabaphathi be-portal ngokwabo futhi bangasasebenzi ngamabhange kuphela, ngokwenza inqubo ibe yidijithali. Ngaphezu kwalokho, kungeniswe izigaba ezimbili ezintsha esigabeni sabatshalizimali abagunyaziwe: "abatshalizimali abangochwepheshe abaceliwe", abakhonjwe ngokuya ngomthetho wase-European Mifid ekuhlinzekweni kwezinsizakalo zokutshala imali kanye "nabatshalizimali abeseka okusha", umbono ohlanganisa abasebenza njengezingelosi zebhizinisi. Ekugcineni, umthetho weBhajethi we-2017 (ubuciko.1, isigaba 70) waqala inqubo yokwelula ukusebenza kwensimbi kuwo wonke ama-SME ase-Italy.
Ukungenelela okuenziwe lula, kwamahhala nokuqondile kweziqalo ezintsha at IsiKhwama Sesiqinisekiso Samabhizinisi Amancanyana Naphakathi, isikhwama somphakathi esisiza ukufinyelela kwesikweletu ngokunikezwa kweziqinisekiso kwimalimboleko yasebhange (ukusebenzisa umyalo; umhlahlandlela). Lesi siqinisekiso sihlanganisa kuze kufinyelele ku-80% wesikweletu esinikezwe yibhange iziqalo ezintsha kanye nokufaka okufakwe okuqinisekisiwe, okufika kumanani aphakeme we- €,2,5 wezigidi, futhi sinikezwa ngesisekelo sokufinyelela okulula kakhulu, ngophenyo oluzuzisa wesiteshi esibaluleke kakhulu.
I-ICE Agency: izinsiza zokukhangisa ezenziwa ngokwezifiso zezwekazi. Isikhungo sinikeza usizo ezindabeni zokulawula, ezinkampanini, ezentela, ezokuthengiswa kwezakhiwo, ezezinkontileka kanye nezindaba zesikweletu: Ukuqala okusha kunelungelo lesaphulelo sika-30% ngezindleko ezijwayelekile, ezikhokhwa ngokucela "Ikhadi Lokuqala Lenkonzo" elifanele urp@ice.it. Ngaphezu kwalokho, ukwenza lula umhlangano nalabo ongaba ngabatshalizimali bangaphandle, i-ICE ihambisana nokuqalwa kwamahhala okukhokhelwa mahhala noma ngezimo ezixhaswe kweminye imicimbi esezingeni lomhlaba jikelele emisha: ikhalenda lemisebenzi ehleliwe iyatholakala kwi-portal www.innovationitaly .com / en /.
Ukwehluleka: uma kwenzeka wehluleka, iziqalo ezintsha zingathembela ezinqubweni ezisheshayo nezingasebenzi kakhulu kunalezi ezijwayelekile zokuphetha imisebenzi yazo. Ngokukhethekile, zingaphansi kwenqubo kuphela yokuxazululwa kwenkinga kusuka ezikweletini ngokweqile nasekuphelisweni kwezimpahla, nokukhululwa, ikakhulukazi, ezinqubweni zokuqothuka, ukuhlelwa nababolekisi kanye nokupheliswa okuphoqelelwa kokuphatha. Ukuqalwa kwezinto ezintsha ngakho-ke kubalwa phakathi kwezifundo "ezingekho ngokukhohlakala", ukuze kuvunyelwe ukufinyelela ezinqubweni ezilula zokuxazulula inkinga ngokuqhubeka kanye nokunciphisa isikhathi sokuvalwa kwecala, ukunciphisa imithwalo ehambisana nokuqothuka, kufaka phakathi ukucwasana ngokwamasiko.
Izinguquko zibe I-Innovative SME: uma yimpumelelo, ukuqala okuhle okuvuthiwe futhi kuqhubeke kubonakaliswa yingxenye ebalulekile yokwenza izinto ezintsha kungaphenduka ama-SME amasha. Ngokuphakamisa ukusekela zonke izinkampani ezibonakaliswe amandla okuqamba, i-Decree Law 3/2015, eyaziwa nge- "Investment Compact", inikeze ingxenye enkulu yezinyathelo esezishiwo ukuzuzisa iziqalo ezintsha kumlaleli omkhulu: Ama-SME amasha ngokunembile, i.e. wonke amabhizinisi amancane naphakathi nendawo asebenza emkhakheni wezobuchwepheshe, kungakhathalekile usuku lokuqalwa, injongo yenhlangano kanye nezinga lokuvuthwa.
 Imibono nemisakazo ngomthetho iyatholakala ngokulandelayo isixhumanisi.
 Yonke imithetho, eyokuqala neyesibili, ephathelene nenqubomgomo yokuqalisa okusha, izinkombandlela nemibhalo ehlobene nayo, kanye nemibiko ngemiphumela yezinyathelo iyatholakala ingxenye ezinikezelwe kuwebhusayithi ye-MISE.
 Ibhokisi leposi lemininingwane: isiqalo@mise.gov.it.
Izinyathelo ezengeziwe ezixhasa i-ecosystem emisha
Ngaphezu kokuhlinzekwa kwesimemezelo sokuKhula kwe-2.0, uMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho ubandakanyeka kwezinye izinhlelo ukusekela uhlelo lwentuthuko emisha:
I-Smart & Qala i-Italy (isiza; isifinyezo): Isinqumo Sikangqongqoshe sangomhla zingama-24 Septhemba 2014 sethule uhlelo lokuxhaswa ngezimali loxhasomali lweziqalo ezintsha ezitholakala kuyo yonke indawo yezwe. Ukunikezwa kwezezimali cishe cishe yizigidi ezingama-200 zama-100, kunikezwe amandla okuphelelwa yimali esikhundleni semiklamo ebona ukusetshenziswa kwezinhlelo zesamba esiphakathi kwe- $ 1,5 ne-70 80 yezimpahla zokutshala kanye / noma izindleko zokuphatha. . Lezi zinhlelo zokusebenzisa imali zizohlanganiswa nempahla ebanjelwe ngamaphesenti angama-35%; isabelo embozwe imalimboleko exhasiwe ifinyelela kuma-20% uma amaqembu ezinkampani eningi labesifazane noma elingaphansi kweminyaka engama-60. Uma iziqalo zokuqalisa ezintsha zitholakala esifundeni sokuhlangana, u-12% wemali unikezwe isikhwama esilahlekile. Isilinganiso sisebenza nakubantu abazinikezela kungakapheli izinsuku ezingama-30 ukuqala into entsha. Isikhathi sokuqala esisungulwe isikhathi esingaphansi kwezinyanga eziyi-2017 futhi siyazuza emisebenzini yokufundisa ngokulawulwa kwezobuchwepheshe. Izicelo ezivela ekuqaleni eziqala ukuxhasa okungenani ama-XNUMX% wecebo lokutshala imali ngemali enkulu evela kubatshalizimali bezikhungo iziswa kakhulu. Uhlelo lwavuselelwa kabusha ngomthetho weSabelomali sango-XNUMX.
"Umxhasi wokuqalisa": ukudlulisela ukulahleka kwebhizinisi okusha ezinkampanini ezifakwe ohlwini. Umthetho weBhajethi ka-2017 (ubuciko. 1, izigaba 76 kuya ku-80) wethula, kuzo zonke izinkampani zabatshalizimali okungenani ezingama-20% wemali eyabelwe, amathuba okudlulisela, ukubuyisa, ukulahleka okwenziwe eminyakeni emithathu yokuqala yebhizinisi (isigaba sokuqala). Ngokubuyiselwa, inkampani okudluliselwe kuyo ilahlekelwe ("umxhasi") ingadonsa inani layo ngendlela efanayo nokwabiwa kwemali yentela, inqobo nje uma amasheya ayo ebhalwe emakethe elilawulwayo noma emakethe uhlelo lokuhweba lwamazwe amaningi. Isabelo kufanele sihambisane nenani lonke lokulahleka kwentela.
Yethulwe nguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho ngoJuni 24, 2014, uhlelo I-Italy Startup Visa (Iwebhusayithi esemthethweni nemihlahlandlela) yethule inqubo entsha eyenziwe lula yokuhlinzekwa kwama-visa wokungena emsebenzini wokuzenzela izakhamizi ezingezona ze-EU ezihlose ukuqala okuhle ezweni lethu. Ngokwesisekelo salolu hlelo kunenkolelo yokuthi umhlangano wamabhizinisi ahlukahlukene wokuhweba umele isakhi esibalulekile ekuthuthukiseni uhlelo lwamasiko emvelo amasha. Inqubo entsha, ebaluleke ngokubambisana koNgqongqoshe Wezangaphandle, Izinqubomgomo Zangaphakathi Nezabasebenzi kanye Nezenhlalo, ishesha kakhulu - ivala kungakapheli izinsuku ezingama-30 -, ezimaphakathi - ingeyokuphathwa okukodwa - futhi kwedijithali - Kwenzeka ngokuphelele online. Imininingwane eyengeziwe iyatholakala emibikweni yekota yohlelo (bheka isigaba "Ukuqapha kanye nokuhlola") ethula imiphumela esemqoka etholwe ngokuya ngezicelo, amazwe asuka ezinkampanini ezisunguliwe. Ngaphezu kwalokho, ibhokisi leposi liyasebenza, info.italiastartupvisa@mise.gov.it, ongathinta noma yikuphi ukucaciswa ngezinqubo.
Lolu hlelo lwethulwa ngomhla zingama-23 kuZibandlela 2014, imodeli ye-Italia Startup Visa I-Italy Startup Hub, eye yandise ukusetshenziswa kwenqubo esheshayo echazwe ngenhla futhi kwizakhamizi ezingeyona i-EU ezivele zinemvume yokuhlala (etholwe ngokwesibonelo ngezizathu zokufunda), ezihlose ukwandisa ukuhlala kwazo e-Italy ukuqala ukuqala okusha: Ngale ndlela, bangaguqula imvume yabo yokuhlala ibe "imvume yokuziqashela umsebenzi wokuqasha" ngaphandle kokushiya insimu yase-Italy futhi bajabulele inqubo efanayo eyenziwe lula yokuthola ama-visa wokuqalisa. Iwebhusayithi yesikhungo yalolu hlelo, italiastartuphub.mise.gov.it, yethulwa ngomhlaka 22 Ephreli 2016 (imihlahlandlela). Ngeminye imininingwane ungathinta ikheli info.italiastartupvisa@mise.gov.it.
Ngokubambisana noMnyango Wezemfundo, Inyuvesi Nezokucwaninga (i-MIUR), ngonyaka ka-2013 kwethulwa iphrojekthi yokushayela emanyuvesi athile e-Italy yeziNhlangano Zombuso ukuze kusungulwe Ilebhu yokungcolisa, izindawo zokungcola okubandakanya izindlela ezihluka-hlukeneyo ezikhuthaza isiko lebhizinisi, izindlela ezintsha kanye nezinhlobo zokufunda ezintsha. Iphaneli yongoti eqokwe yilezi zingqongqoshe ezimbili ikhethe iMedical University of Reggio Calabria (iwebhusayithi ye-Contamination Lab), i-University of Calabria, iCosenza (iwebhusayithi), i-University of Catania (iwebhusayithi), iNyuvesi weStars of Naples Federico II, uMnyango Wezesayensi Yezenhlalo (iwebhusayithi). NgoDisemba 2, 2016, ngemuva kokuba ama-semes amane ehlinzekelwe isinyathelo sangaphambilini, i-MIUR yethule uhlelo olusha lweCommunication Lab, ngokufakwa ngokwezimali ama-euro ayizigidi ezi-5.
Izinyathelo ezimbili ezibalulekile ezixhasa ukwenziwa kwezinto kwezobuchwepheshe ezisebenza endaweni yonke yezinkampani zase-Italy zithakazelisa kakhulu iziqalo nama-SME amasha:
Izikweletu Zentela Yezokucwaninga Nentuthuko (ishidi lokufingqa): wethulwa noMthetho Wezezimali wezi-2015 futhi olawulwa yisimemezelo sikaNgqongqoshe Wezomnotho Nezimali, ngokwesivumelwano noNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho, womhla zingama-27 Meyi 2015, leli thuluzi selithuthukisiwe kakhulu noMthetho zezitatimende zezezimali ze-2017 (ubuciko 1, izigaba 15 no-16). Ngokucushwa kwayo okusha, okusebenzayo kusukela esikhathini sentela sonyaka we-2017, isikweletu sentela siyabonwa ngenani lama-50% wezindleko zonyaka ezonyukayo emisebenzini yocwaningo nentuthuko, zombili izindleko zokucwaninga ama-intramuros zombili izindleko ama-extramuros. Inani eliphakeme loxhaso lilingana nama-euro ayizigidi ezingama-20 esikhathini ngasinye sentela. Isisekelo soxhaso sibalwa kusetshenziswa isilinganiso sezindleko ezitholwe ezikhathini ezi-3 zentela ngaphambi kwaleyo eqhubekayo kusukela ngomhlaka 31 Disemba 2015; isimo sokuthola isikweletu ukuthi esikhathini ngasinye sentela izindleko zezinto zocwaningo nezentuthuko ezilingana okungenani nama-euro angama-30.000 zitholiwe. Ngomthetho Wesabelomali we-2017, izinkampani ezisebenza e-Italy ngesisekelo sezivumelwano zamakhasimende nezinkampani ezihlala noma ezitholakala phesheya manje sezihlanganisiwe nemvume. Phambilini, umxhaso wawubonwa enanini elingu-25% lezindleko ezengeziwe emisebenzini ye-R & D eyenziwayo ama-intramuros, ngenkathi isilinganiso se-50% sisebenza kuphela esimweni se Outsourcing o ukusetshenziswa kwabasebenzi abaqeqeshwe kakhulu; inani eliphezulu lemvume lalingama-euro ayizigidi ezi-5. Ukucaciswa okunye ngokusebenza kwe-CIR & S kuyatholakala kusetyhula 5 / E ekhishwe ngoMashi 16, 2016 yiRevenue Agency.
Ibhokisi Patent: Umthetho Wezokuqina Wonyaka ka-2015 (ubuciko 1, izigaba 3745) wethule umbuso ongakaze ubonwe wokwehlukaniswa kwentela ngokuthola imali ngokutholakala kwempahla yengqondo. Okubizwa nge- "Patent Box", okusebenza kusuka ngonyaka ka-2015, ngokuzikhethela kuvumela izinkampani ukuthi zingafaki ama-50% wemali etholakala ekuxhashazweni kwezentengiso kwempahla engaphatheki (impahla yengqondo, amalungelo obunikazi ezimboni, izimpawu zokuhweba) 'inkampani). I-Compact Investment yakamuva kakhulu ithuthukisile leli thuluzi, ngokufakwa okuphelele kwemikhiqizo yezentengiso phakathi kwezimpahla ezingaphatheki lapho inzuzo yentela yamukelwa. Ibhokisi Patent limelela isilinganiso esinamandla sokuheha kwezimali ekuthuthukisweni kwemali engaphatheki, izinhlobo namamodeli wezimboni. Isimemezelo esikhishwe ngomhla zingama-30 kuJulayi 2015 nguMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho esivumelwaneni noMnyango Wezomnotho Nezimali sichaze izinhlinzeko zokusebenzisa, saphinde sacaciswa ngesiyingi 11 / E esikhishwe mhlaka 7 Ephreli 2016 yiRevenue Agency.
Tags: isimemezelo sokuqalisa ukuqala okuhle